Imibuzo evame ukubuzwa - Changzhou Hollysen Technology Trading Co., Ltd.
Ngabe unganikeza amasampula ezandleni zakho?
Yebo singakwazi. Singanikeza isampula esitokweni. Futhi ikhasimende kufanele likhokhele isampula nezindleko zeposi.
Uliqinisekisa kanjani ikhwalithi yemikhiqizo yakho?
Sine-laboratory yethu futhi yonke imikhiqizo ihlolwe ngo-100% ngaphambi kokulethwa. Zonke izinqubo zethu zilandela ngokuqinile izinqubo ze-IATF16949. Futhi-ke, sinewaranti yonyaka ongu-1 kusuka ngosuku lokukhishwa kwe-BL uma usebenzisa umkhiqizo wethu ngendlela efanele.
Ungakwazi ukunikeza insiza oyifisayo?
Yebo, uma ungakwazi ukuthola izimpahla ozidingayo esigabeni sethu, ungathumela izidingo zakho kithi, futhi ithimba lethu lochwepheshe be-R & D lizokwakhela i-ac compressor ngokukhethekile.
Isikhathi sokulethwa esisheshayo izinsuku eziyi-10 futhi isikhathi sokulethwa esimaphakathi izinsuku ezingama-30 ngemuva kokuqinisekisa.
Yini okufanele ngiyenze uma i-oda lami lingakafiki?
Qiniseka ukuthi wonke ama-oda wakho asevele athunyelwe. Uma i-oda lakho libonisa iphakethe lakho kuwebhusayithi yokulandelela selithunyelwe, futhi awulitholi kumaviki ama-2; sicela uxhumane nesevisi yamakhasimende ukuze uthole usizo.
Ngingalandelela kanjani i-oda lami?
Ungahlola isimo se-oda lakho nganoma yisiphi isikhathi ngokuya ngqo kuzixhumanisi ezinikezwe yisevisi yethu yamakhasimende nge-imeyili. Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi kufanele ube nenombolo ye-oda nekheli le-imeyili ukulandelela isimo se-oda. Sizokuthumelela i-imeyili inombolo yokulandela ngomkhondo. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi iwebhusayithi yenkampani yenethiwekhi kungenzeka ingavuseleli amarekhodi nesimo sephasela ngesikhathi.
Ingabe zonke izinto zakho zisesitokweni?
Ngokuvamile, zonke izinto zethu ezisohlwini lwewebhusayithi ziyatholakala. Kepha kwesinye isikhathi ezinye izinto zingahle zingabi ku-oda ngenxa yesidingo esinamandla. Uma uthatha into ethile futhi uyikhokhela, kodwa nganoma yisiphi isizathu ayitholakali, sizoxhumana nawe ngokushesha okukhulu, futhi kungenzeka sikuphakamise ukuthi ukhethe enye into efanayo noma usebenze ukubuyiselwa imali ngokushesha ku-akhawunti yakho.